Monarchies-Ka Bariga Dhexe ee Sacuudig - Land Of Punt
Saudi Arabia, Boqortooyada sixun abaabulay agagaarka Sunni Islam oo hoy u ah kaydka saliidda labaad ee ugu weyn dunida, ayaa ku riyaaqay xiriirka saaxiibtinimo la West, gaar ahaan Maraykanka.
Dib u eeg taariikhda qoyska boqortooyada Sucuudiga iyo sida ay xukunka ugu sii nagaadeen
QODOBBADA MUHIIMKA AH Boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo ka mideysan afar gobol sanadkii 1932 boqorkeedii ugu horreeyay, Ibn Saud, wuxuu ka mid ah ummadaha ugu saboolsan adduunka, laakiin si dhakhso ah wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu qanisan dunida Carabta ka dib markii la helay keyd shidaal aad u weyn 1938. .Wixii intaa ka dambeeyay, ujeeddadeeda siyaasadeed ee dibadeed ee la sheegay inay tahay inay ilaashato ammaankeeda iyo mowqifkeeda ugu weyn ee Jasiiradda Carbeed, iyo inay tahay dhoofinta ugu weyn adduunka ee saliidda, inay ilaaliso xiriirka iskaashi ee la leh soosaarka saliida kale iyo waddammada waaweyn ee saliidda cuna.Sidaas awgeed, waxay ku raaxaysatay xidhiidh wanaagsan oo ay la lahayd reer Galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, sidii tamar istiraatiiji ah iyo mid amni oo iskaashi ah.Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa boqortooyo dhaxal gal ah oo dhaxal gal ah, oo uu xukumo boqor, qoyska boqortooyada ayaa xukumaa nidaamka siyaasadeed.Tirada tirada badan ee qoyska boqortooyada waxay u oggolaaneysaa inay maamusho inta badan jagooyinka boqortooyada oo ay ku lug lahaato oo ay soo bandhigto dhammaan heerarka dowladda.Dhaqdhaqaaqa diimeedka Wahhabi ee ka horyimid Sunni Islam ayaa lagu magacaabaa “astaamaha ugu weyn dhaqanka Sacuudiga,” iyadoo faafistiisa guud ay si weyn u maalgelisay ganacsiga saliida iyo gaaska.
SHURUUDAHA MUHIIMKA AH Sunni IslaamSheega ugu weyn ee Islaamka. Magaceedu wuxuu ka yimid erayga Sunnaha, isaga oo tilmaamaya dhaqanka suubban ee nebiga Islaamka Muxamed. Farqiga u dhexeeya dariiqadan iyo muslimiinta Shiicada wuxuu ka dhashay is afgaranwaaga ku saabsan guushii Muxammad ka dib iyo markii dambe uu helay ahmiyad siyaasadeed oo ballaadhan, iyo sidoo kale cabirrada fiqi ahaaneed iyo sharciga.boqortooyo buuxdaNooc boqortooyo oo hal taliye leeyahay awood sarre oo aan ku xaddidnayn sharci kasta oo qoran, sharci-dejin, ama caadooyin. Kuwani badanaa, laakiin had iyo jeer ma aha, monarchi dhaxalka. Taa bedelkeeda, ilaaliyayaasha dastuuriga ah, awooda mas’uulka dowliga ahi wuxuu ka yimaadaa oo waxaa sharciyeynaya ama xaddidaya dastuur ama sharci dejin.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo si rasmi ah loogu magac daray Boqortooyada Sacuudi Carabiya, waa waddan Carab ah oo ku yaal Galbeedka Aasiya oo ka kooban Gacanka Carbeed. Aagga casriga ah ee Sucuudiga xilliyadii hore waxay ka koobneyd afar gobol oo kala duwan: Hejaz, Najd, iyo qaybo ka mid ah Bariga Carabiya (Al-Ahsa), iyo Koonfurta Arabia (‘Asir). Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaa aasaasay 1932 waxaana aasaasay Ibn Saud. Wuxuu ku midoobey afarta gobol inay yeeshaan hal dowlad isagoo u adeegsanaya guulo xiriir ah laga soo bilaabo sanadkii 1902 qabsashadii magaalada Riyadh, oo ah gurigii ay deggenaayeen qoyskiisa, oo ah aqalka reer Suud. Sacuudi Carabiya ilaa iyo markaas waxay ahayd boqortooyo buuxda, waxay si hufan u qaadatay kalitalisnimo dhaxal gal ah oo lagu xukumo khadadka islaamka. Dhaqdhaqaaqa diimeedka Wahhabi ee ka horyimid Sunni Islamka waxaa lagu magacaabaa “astaamaha ugu weyn dhaqanka Sucuudiga,” iyadoo faafitaankiisa adduunka uu si weyn u maalgeliyey ganacsiga saliida iyo gaaska.
Boqortooyada cusubi waxay ka mid ahayd wadamada ugu saboolsan aduunka, waxay ku tiirsan tahay xaddidan beeraha iyo xajka. Sanadkii 1938, kayd shidaal baaxad leh ayaa laga helay gobolka Al-Ahsa ee ku teedsan xeebta gacanka Faarisianka, iyo horumarin buuxda oo dhinacyada shidaalka ah ayaa ka bilaabmay 1941 taas oo hoos imaanaysa hay’ada la yiraahdo Aramco ee fadhigeedu yahay Mareykanka (Arab American oil Company). Saliid waxay siisay Boqortooyada Sacuudi Carabiya barwaaqo dhaqaale iyo awood siyaasadeed oo mug leh oo caalami ah. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa tan iyo markii ay noqotey soosaarka saliida iyo dhoofinta ugu weyn adduunka, waxay maamushaa kaydka saliida labaad ee adduunka ugu weyn iyo lixaad shidaal ee ugu weyn. Boqortooyada waxaa lagu tilmaamaa inay tahay dhaqaalaha dakhliga sare ee Bangiga Aduunka oo leh Index sare oo Aadamiga Aadamiga ah, waana dalka kaliya ee Carab ah oo qeyb ka ah dhaqaalaha ugu weyn ee G-20. Si kastaba ha noqotee, dhaqaalaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ah midka ugu yar ee lagu kala duwan yahay Golaha Iskaashiga Khaliijka, oo aan haysan adeeg muhiim ah ama waax soosaar (marka laga reebo soo saarista kheyraadka). Wadanku wuxuu soo jiitay dhalleeceyn ku saabsan xanibaadaada xuquuqda haweenka iyo adeegsiga ciqaabta dilka.
Saliida Sacuudi Carabiya: Dammam No. 7, ceelka saliida ganacsi ee ugu horreeyay ee Saudi Arabia, wuxuu ku dhuftay saliid bishii Maarso 4, 1938. Sacuudi Carabiya waxay noqotay tan soo saarta saliida ugu weyn adduunka iyo dhoofinta, xukuma kaydka saliida labaad ee adduunka ugu weyn, iyo tan shidaalka shidaalka ee lixaad ee ugu weyn.
Siyaasadda: Boqortooyada Oo Aan Dhammaystirnayn
Sacuudi Carabiya waa boqortooyo buuxda. Si kastaba ha noqotee, sida ku xusan Sharciga Aasaasiga ah ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya uu qaatay wareegtada boqortooyada ee 1992, boqorka waa inuu adeecaa shareecada (sharciga Islaamka) iyo Qur’aanka, halka Qur’aanka iyo Sunnaha (caadooyinka Muxamed) lagu caddeeyay inay yihiin dastuurka waddanka u yaal. . Lama oggola xisbiyo siyaasadeed ama doorashooyin qaran. Dadka dhaleeceeya waxay u tixgeliyaan inay tahay kaligii taliye guud.
Maqnaanshaha doorashooyinka qaran iyo axsaabta siyaasadeed, siyaasada Sacuudi Carabiya waxay ka dhacdaa laba meelood oo kaladuwan: qoyska boqortooyada, Al Saud, iyo inta u dhaxaysa qoyska boqortooyada iyo bulshada inteeda kale ee reer Sacuudi. Wixii ka baxsan Al-Saud, ka-qeybgalka geeddi-socodka siyaasadeed wuxuu ku xaddidan yahay qayb yar oo ka mid ah dadweynaha wuxuuna qaabeystaa qaab qoyska reerka oo kala tashanaya imtixaanka, sheekooyinka qabiilka, iyo xubnaha qoysaska ganacsiga muhiimka ah ee go’aannada waaweyn. Nidaamkan ma soo sheegin warbaahinta Sacuudiga.
Boqorka wuxuu isku daraa sharci dejinta, fulinta, iyo howlaha garsoorka iyo amarada boqornimada oo asaas u ah sharciga wadanka. Boqorka sidoo kale waa ra’iisul-wasaaraha wuxuuna maamulaa Golaha Golaha (Majlis al-Wuzarāʾ), oo ka kooban ra’iisul-wasaare ku-xigeenka koowaad iyo labaad iyo wasiirro kale.
Qoyska boqortooyada ayaa xukumaa nidaamka siyaasadeed. Tirada tirada qoysku waxay u oggolaaneysaa inay maamusho inta badan jagooyinka boqortooyada oo ay ku lug lahaato oo ay soo bandhigto dhammaan heerarka dowladda. Tirada amiirrada waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan ugu yaraan 7,000, iyadoo awooda iyo saameynta ugu badan ay ku dhaceyso 200 oo ka mid ah wiilasha Ibnu Saud. Wasaaradaha muhiimka ah guud ahaan waxaa loo haystay qoyska boqortooyada, iyo sidoo kale saddex iyo tobanka maamul goboleed. Qoyska boqortooyada waxaa siyaasad ahaan loogu qaybiyaa kooxo ku saleysan daacadnimo qabiileed, himilooyin shaqsiyeed, iyo kala duwanaansho xagga fikirka ah.
Abdul Aziz Ibn Saud, oo ahaa boqorkii ugu horreeyay ee Sucuudi Carabiya, wuxuu xukumay 21 sano. Sanadkii 1953, Sacuudi Carabiya wuxuu ku guuleystey inuu noqdo boqorka Sucuudiga markii la diley aabihiis, ilaa iyo 1964 markii loo caleemo saaray walaalkiis kalabar Faisal Sacuudi Carabiya, ka dib dagaal aad uxun, kaas oo shaki geliyay qoyska boqortooyada Sucuudiga. kartida. Sanadkii 1975, Faisal waxaa dilay wiil uu adeer u yahay, Amiir Faisal bin Muuseid, waxaana ku guulaystay walaalkiis nabi King Khalid. King Khalid wuxuu u dhintay wadne istaag bishii Juun 1982. Waxaa bedelay walaalkiis, King Fahd, oo magaciisa ku daray “Masaajidka labada Masaajid ee Qudduus” 1986 isaga oo ka jawaabaya cadaadis aad u weyn oo xag jirnimo ah si looga fogaado adeegsiga “sharafta. “Iyada oo lala kaashanayo wax kasta oo aan ka ahayn Ilaah.
Fahd wuxuu sii waday inuu cilaaqaad dhow la yeesho Mareykanka wuxuuna kordhiyay iibsiga qalabka militariga Mareykanka iyo Ingiriiska. Marka laga jawaabayo qalalaasaha sokeeye, dhowr “dib u habayn” xadidan ayaa waxaa bilaabay King Fahd. Bishii Maarij 1992, wuxuu soo saaray “Sharciga Aasaasiga ah”, kaas oo carrabka ku adkeeyay waajibaadka iyo waajibaadka taliye. Bishii Disember 1993, Golaha wadatashiga ayaa la sameeyay. Waxay ka kooban tahay gudoomiye iyo 60 xubnood – oo dhamaantood ah Boqorka ay doorteen inay ka jawaabaan kuwa diiddan iyagoo sameynaya isbadallo yar oo macquul ah xaalada hada jirta.
Sannadkii 2005, King Fahd wuu dhintey waxaana ku guulaystay Abdullah, oo sii waday siyaasaddii dib u habaynta ugu hooseeya isla markaana hoos u dhigay mudaharaadyada. Boqorka wuxuu soo saaray dhowr dib-u-habeyn dhaqaale oo loogu talagalay yareynta ku tiirsanaanta waddanka ee dakhliga saliidda: dib-u-dhigid xaddidan, dhiirigelinta maal-gashiga shisheeye, iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Sanadkii 2015, Abdullah waxaa boqor ka noqday walaalkiis nabi Salmaan.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa waddan aan xidhiidh la lahayn oo ujeeddooyinkeeda siyaasadeed ee arrimaha dibedda lagu sheegay inay tahay inay ilaashadaan nabadgelyadeeda iyo mowqifka ugu weyn ee Jasiiradda Carbeed, iyo sida adduunka ugu weyn ee saliida u dhoofiya, si loo ilaaliyo xiriir iskaashi lala yeesho wadamada kale ee soo saara saliida iyo kuwa saliida cuna. .
Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay siyaasadu inay diirada saareyso wadashaqeynta wadamada dhoofinta shidaalka ee Khaliijka, midnimada dunida carabta, xoojinta Islaamka iyo wadajirka, iyo taageerada Qaramada Midoobay. Ficil ahaan, welwelka ugu weyn ee sanadihii la soo dhaafay wuxuu ahaa xiriirka Mareykanka, khilaafka Israel iyo Falastiin, Ciraaq, qatarta loo arkaa Jamhuriyadda Islaamiga ah ee Iran, saameynta qiimaha saliida, iyo u adeegsiga hantideeda saliida si loo kordhiyo saameynta. diinta Islaamka iyo gaar ahaan iskuulada muxaafidka ah ee islaamiga oo ay taageerayaan maamulayaasha dalka.
Mareykanka wuxuu aqoonsaday dowladda King Ibn Saud sanadkii 1931-kii. Ma jirin safiir Mareykan ah oo deggan Sacuudiga ilaa 1943, laakiin markii Dagaalkii Labaad ee Adduunka uu sii socday, Mareykanka wuxuu bilaabay inuu rumeysan yahay in saliida Sacuudiga ay muhiimad istiraatiiji ah leedahay.
Sannadkii 1951, iyada oo la raacayo heshiis difaaca labada dhinac ah, Mareykanku wuxuu aasaasay Howlgalka Tababbarka Ciidamada ee Mareykanka ee joogtada ah ee boqortooyada waxaana la isku raacay in la siiyo taageero tababar xagga adeegsiga hubka iyo adeegyada kale ee la xiriira amniga ee la siinayo ciidamada qalabka sida ee Sacuudiga. Heshiiskani wuxuu asaas u ahaa xiriir nabadgelyo oo soo jireen ah. Mareykanka waa mid ka mid ah xulafada ganacsi ee ugu weyn Sacuudiga iyo xulafada ugu dhow, xiriir diblomaasiyadeed oo dhammaystiranna tan iyo 1933-kii ayaa maanta sii xoogaysanaya. Si kastaba ha noqotee, xiriirka Sucuudiga uu la leeyahay Mareykanka ayaa cadaadis la saaray illaa dabayaaqadii 2013 ka dib markii Mareykanku ka taageeray faragelintiisii dagaalkii sokeeye ee Syria oo uu xumaaday xiriirkii Iran.